Amaphupho ngokulunywa – iAfrika
Uma uphupha ukuthi ulunyiwe kusho ukuthi kukhona into ezokwenzeka maduzane ezokwenza ube nesikhwele kakhulu. Uma unenxeba lenyoka ephusheni lakho kuzoba yinto ehlangene nobudlelwane.
17 thoughts on “Amaphupho ngokulunywa”
Ngcela ukubuza kuchazani ukuphupha udutdhulwa kdua ungafi noma bekudubula ekhandi kdua still ungafi
20/02/2022 at 04:34
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngenhlamvu
11/11/2021 at 12:04
Ngicela ukubuka, ngiphuphe kunezinyoka ezincane esiswini sami. Uma ngizikhipha bengidonsa konke nesikhumba futhi ngithukile. Soon after that, ngezwa umsindo wenyoka uma ngiqalaza phansi ngabona inyoka emnyama ebibusy idea lesinyoka ebengizikhipha esiswini. Iqede lapho yavimbezela thina nabesikade sinabo kodwa sakwaz ukuphulukundlela sabaleka
Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngenyoka
Cela ukubuza kuchazani ukuphupha I crocodile ungena kulawo manzi
01/09/2021 at 07:25
Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngengwenya
23/03/2021 at 11:44
Ndicela ukubuza xa uphupha ulunywa zizinja izandla zonke ezi zinja zi bulldog
24/03/2021 at 09:16
Cofa lapha ukuthola incazelo https://iafrika.org/amaphupho-ngenja/
Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha umuntu owawuthandana naye ebese umawakhe angicele ukuthi ngipheke ipapa lamazambane no carrots angbize ngoKoti
Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngezitshalo/o
Sanibona ngicela ubuza kuthetha ukuthini uphutshelwa gumuntu ohlala next door kuwe ushata and futhi ngigabukeki nginwabile kulomushato nenwele zam zihlaga hlangene.
30/12/2020 at 14:33
Cofa lapha ukuthola incazelo yephupho lakho https://iafrika.org/amaphupho-ngomshado/
Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha imamba emnyama izigoqile ingenewo amandla,nami ngiyidlalisa
Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha inqwaba yezinyoka zihamba emgwaqeni ngase khaya lakho owakhulela kulo kodwa esenathutha kulo?
14/11/2020 at 11:16
Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka/
10/08/2021 at 07:04
Ngiphuphe ngathi besisendlini encane .kwangena umfazi womlungu wathi sesiboshiwe ngoba singine etoilet labamhlophe , saphuma sithi siyabaleka wavulela inja emnyama yasigijimisa masibaleka yabamba omunye wethu yamluma ekhanda ngathi yambulala mangigijima nayi ibhekene nami ayikhonanga ukungiluma ngoba ngathi ngiyengazenza ofile yangindlula, ngabe lisho ukuthini lephupho.
18/08/2021 at 10:20
Cofa lapha ukuthola incazelo Ukuphupha indle noma indlu yangasese